आखिर बन्ने नै भए नवराज सिलवाल गृह राज्यमन्त्री ? यस्तो छ तयारी ! – Setosurya
काठमाडौ । ललितपुर–१ का सांसद एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी नवराज सिलवाललाई गृहराज्यमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिलवाललाई राज्यमन्त्री बनाउन राजी गराइसेकका छन् ।
अर्कोपटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा सिलवालले सपथ लिने सम्भावना बढी रहेको बालकोट स्रोतले बतायो । दाबेदारमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ भए पनि तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नबनाएको भन्दै सिलवाल अदालत गएका थिए ।
यद्यपि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डुले सिलवालविरुद्ध किर्ते मुद्धा चलाउन नमानेपछि अब उनीविरुद्ध कुनै औपचारिक अभियोजन छैन । सिलवाल आफ्नो निर्वचन क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा हुने पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।
लिलामणी भन्छन् – “म माओवादी होईन”
रोकिदैन बुथकब्जाको श्रृङ्खला : बुथकब्जा गर्न कुन दल बढी पावरफुल ?
नुन अभाव हल्ला मात्र : साल्ट ट्रेडिङ
यस्तो हुँदैछ इटहरी र धरान उपमहानगरमा
गायिका संगिता थापामगरको देशभक्ती गित “म त नेपाली” बजारमा (भिडियो सहित)